KENYA oo qoraal cusub oo yaab leh kasoo saartay kiiska dacwadda badda - Caasimada Online
Home Warar KENYA oo qoraal cusub oo yaab leh kasoo saartay kiiska dacwadda badda
Nairobi (Caasimada Online) – Dowladda Kenya ayaa soo saartay qoral ka kooban 11 qodob oo ay kaga hadleyso sababta ay kaga maqneyd dacwadii badda ee dhawaan lagu dhageysatay maxkamadd cadaaladda adduunka ee ICJ.
Kenya oo wali ka gil-gilaneysa xanuunka guul-darada kusoo fool leh ayaa sidoo kale sheegtay in daraf saddexaad uu ku milan yahay kiiska, taasoo ay ku sheegeen inuu dano ganacsi halkaas ka leeyahay.
Waxaya qoraalka ku sheegeen in arrinta gacanta saddexaad ay walaaceeda leedahay, khatarna ku tahay xasiloonida, nabadda iyo amniga Geeska Afrika.
Qoraalka ay maxkamadda ICJ u dirtay waxaa ka mid ahaa hawlo aan shaqo ku laheyn kiiskaan oo ay ka mid tahay iney dadaal badan ku bixiyeen nabad-galyada Soomaaliya iyagoo dagaal kala hortagay Al-Shabaab, sidoo kalana ay magan-galyo siiyeen shacabkooda kasoo cararay colaadda.
Waxa kale oo ay u sheegtay in diyaar-garowgeedii ku aadaneyd dacwada Badda uu hoos u dhigay cudurka Coronavirus, kaasi oo markale kusoo labo kacleeyay dunida.